भक्कानिदै जनमुक्ति सेनाले प्रचण्डलाई लेखे यस्तो खुला पत्र,आफुलाई सम्हालिदै एक पटक पढ्नुहोला::Nepal's Online News Portal
भक्कानिदै जनमुक्ति सेनाले प्रचण्डलाई लेखे यस्तो खुला पत्र,आफुलाई सम्हालिदै एक पटक पढ्नुहोला
शनि, फाल्गुन १२, २०७४
पुर्ब प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार तथा अभिवादन !
तपाईको नाममा धेरै फेर पत्र लेखे । अनि अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न सकारात्मक आलोचना पनि गरे ।
आजको दिन सम्म आउँदा जनयुद्ध लड्ने तपाईंको योद्धाहरु भटाभट पिजडामा कैद हुँदैगर्दा सबै सरकार तपाईंको समर्थन मै बनेका छन । तपाईंलाई जनयुद्धमा सुरुक्षा दिने तपाईंकै सहयात्रीहरुको गिरफ्तारले तपाईंमा बर्गिय माया र एजेन्डा हराउदै गयो ।
बरु परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न आफ्नै सहयात्री पिजडा भित्र राख्दा बर्गिय बिचारको धनी भनेर तपाईंलाई कसरी भन्ने? हिजो जनयुद्धलाई अपराधी देख्नेहरु टाउकोको मुल्य तोक्नेहरु आज तपाईंको सहयात्री र मित्र भए ।
हिजो तपाईको निर्देश पालाना गर्ने र तपाईलाई बचाउनेहरु तपाईंको दुश्मन किन देख्नु भयो प्रचण्ड कमरेड । तपाईंको निर्देशमा मर्न तयार भएका कमान्डरहरु प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा धावा बोल्दै तिनै कमान्डरहरुले तपाईंलाई सिहदरबारको सुकिलो बिछ्यौना सम्म पुर्याए ।
कदम कदाचित प्रतिक्रान्ती रोक्न नेतृत्व झुक्यो भने हजारौं योद्धा कमान्डर क्रान्ति जारी राख्नु पर्छ भनेर भनेर क्रान्तिको दस्तावेजमा तपाई भनाई दाखिला छ ।
आज तपाईको स्कुलिङमा कमान्डर बनेकाहरुले क्रान्तिको सपना देख्नु के गलत होर प्रचण्ड कमरेड ? बरु तपाईले क्रान्तिका लागि उमारेको बिरुवाहरु आज माक्स, लेनिन आमो बन्न तयार हुँदा खुसी हुनुपर्थ्यो हैन र कमरेड ? पद पैसा र भ्रष्टाचार मात्र जन्माउने व्यवस्था विरुद्ध क्रान्तिकारीले जनसत्ता र जनअदालत कायम गरेर जनतालाई न्याय दिनु गलत हो त ? जुन कुरा तपाईले नै सिकाउनु भयो ।
आफुले रचेको इतिहासलाई आफै अपराध सिद्द गर्नु खोजे इतिहासले छुट कसैलाई दिदैन ।
स्मरणहोस् प्रचण्ड कामरेड सिहदरबारका रैथाने बुर्जुवाहरु यो देशका बाधक हुन् । जब सम्म यिनीहरुको रबैया यो देशमा चल्छ तव सम्म देशले परिवर्तन कहिलै पाउने छैन ।
राजनीतिलाई आफ्नो आफ्नो पारिवारिक नालीबेलीको सेवामा समर्पित पेवा बनाएका सामन्तीहरुले यो देशको मुहार फेर्नेकुरा काल्पनिक कथा मात्र हुन् । होइन भने तपाई अब भन्नु सक्नु पर्छकि, जनयुद्द गलत थियो, जनयुद्दमा मारिएका शहिदहरु शहिद होइनन र यिनै सिहदरबारका रैथाने ठालुहरू देवता हुन् । यिनैले परिवर्तन दिन सक्छन हामी गलत थियौ ।
यतिबेला हिजोका कथित संसदवादीहरु तपाईंको ढाडमा टेकेर क्रान्तिकारी शक्तिको शिरमा प्रहार गर्न सजिलो भएको छ तर यसको परिणाम असामान्य हुनसक्छ । अहिले तपाईंलाई योग्य र शक्तिशालि बनाएका छन् किनकि तपाईंले जन्माएको बिरुवाहरुलाई अपराधी र अयोग्य बनाउन सजिलो हुने ठानेका छन्, टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु ।
सबैलाई अयोग्य बनाउदै अन्ततः तपाईंलाई सेरेमोनियल बनाएर हाम्रो इतिहासलाई नै समाप्त पारिदिने चेष्ट गर्दै छन्दे । अझै पनि तपाईलाई अभिभावक सम्झेर आफ्नो पिडा, गुनासो र आलोचना गर्दा मन भावुक हुन्छ, अनेक प्रस्नहरु गर्न मन लाग्छ । बास्तवमा यति छिटै हाम्रो अभिभावक र नेता गलेको देख्ने मन थिएन ।
पुर्ब प्रधानमन्त्री ज्यु तपाईंले भन्नु हुन्थ्यो क्रान्तिकारीहरु ‘रुदा रुदै हास्नु पर्छ’ भनेर तर गणतन्त्र आए पछि क्रान्तिकारीहरु रुनु मात्र पर्यो । अन्याय अत्याचार भोग्नु मात्र पाइयो । सीमाबाट पिलर हराएको मात्र खबर पढ्न पाइयो ।
नेपाली चेलीहरु विदेशका गल्लीमा बेचिएको खबर र ती चेलीहरुको अँखा भरी आँसु देख्न पाइयो । खेतबारी साहुँको जिम्मा लगाएर पैसा कमाएर सासुको रिन तिर्न विदेश गएका युवाहरुको रातो बाकस फर्किदा बिरतीयको क्षण देख्न पाइयो ।
अब यो कुन गणतन्त्र हो ? कसका लागी आएको हो ?
तपाईंले नै भन्नू भएको हो ‘अन्याय सहनु भन्दा बिद्रोह गरेर न्याय खोज्नु’ । आज क्रान्तिकारीहरुले चाहेको जस्तो न्याय अझै मिलेको छैन, तसर्थ बिद्रोह गर्नु अधिकार तपाईकै मार्गदर्शनलाइ पालना गर्दछौ ।